दरवार हत्याकाण्ड : को थिए भविष्यवाणी गर्ने जोगी ? - समय-समाचार
समय-समाचार सोमबार, २०७७ जेठ १९ गते, ००:५३ मा प्रकाशित
सं २०५८ जेठ पहिलो साताको कुरा हो । बीपी पुत्र श्रीहर्ष कोइराला बालुवाटरस्थित कार्यालयमा व्यस्त थिए । खत्री थरका एक व्यवसायी हस्याङफस्याङ गर्दै आइपुगे । तिनताका श्रीहर्षका काका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने उनी आफैँ पनि कृषि विकास बैंकका सल्लाहकार । कृषि र कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने व्यवसायी कल्याण खत्रीले भने – ‘‘श्रीहर्षजी ! व्यवसायमा मलाई धेरै नोक्सानी भयो, कृषि विकास बैंकमा अलिकति ऋण छ मिनाह गराई दिनुपर्‍यो ।’’ श्रीहर्ष भन्दै थिए – ‘यार मैले कसरी मिनाह गर्न सक्छु ?’ धेरै कर गरेपछि उनले खत्रीलाई भनिदिए ‘‘ठीक छ निवेदन हाल्नुस् के गर्न सकिन्छ म प्रयास गर्छु ।’’
Writer: Jagat Bhurtel : POST PHOTO:PRAKASH CHANDRA TIMILSENA